Minneriya, safari kacha mma na Sri Lanka | Akụkọ Njem
Enric Gili | | Colombo, General, Oge ntụrụndụ, Sri Lanka
Taa, aga m agwa gị banyere otu n'ime njem mmụta dị mkpa ma ọ bụrụ na ị gaa Sri Lanka, safari na Minneriya National Park.
Minneriya bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ kachasị ibu na Sri Lanka. Ọ dị na mpaghara mgbago ugwu nke mba ahụ ma nwee mpaghara dị hectare 9000.
Ọ nwetara nchedo gọọmentị dị ka ogige na 1997 nyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke anụ ọhịa na ala ya yana ichekwa ọdọ mmiri ndị na-eweta ahịhịa na anụmanụ nke mpaghara ahụ.
Ọ bụ mpaghara nchekwa dị oke mkpa ma na-asọ mpi maka ewu ewu na Yala, Bundala na Udawalawe, ndị kacha mara amara na Ceylon. Onye ọ bụla n'ime ha pụtara otu ihe kpatara ya, o doro anya na Minneriya n'ihi enyí ndị ahụ. Onye ọ bụla nke gara Sri Lanka ga-agarịrị na ogige ntụrụndụ mba 1 ma ọ bụ abụọ.
Oge kacha mma iji bịa bụ site na Julaị ruo Ọktọba, oge ọkọchị na mgbago ugwu nke obodo ahụ. N'oge udu mmiri, mmiri ozuzo dị ụkọ ma a na-amanye ụmụ anụmanụ ịkwaga n'obere ogige na ọdọ mmiri.
1 Otu esi aga Minneriya?
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na Minneriya? Anụmanụ
3 Kedu ihe ị ga-ahụ na Minneriya? Ifuru
Otu esi aga Minneriya?
Minneriya dị nso na triangle ọdịbendị a ma ama nke Sri Lanka, saịtị 3 kachasị mkpa na mba ahụ na n'ezie ebe kachasị njem na Ceylon (Sigiriya, Anuradhapura na Polonnaruwa). N'ihi nke a, ọ dịtụ mfe ị ga-a National Park. Dịka, ndị njem na-eme triangle ọdịbendị na-ahọrọ ime Safari Minneriya.
Iji banye ebe ahụ ma mee safari ma ọ bụ banye n'ime, ị ga-akwụrịrị ọrụ nke ụlọ ọrụ nke onwe gị yana ụgbọ ala 4 × 4 na onye ọkwọ ụgbọ ala, ịnweghị ike ịga naanị gị (dịka nke 2015). Naanị ụgbọ ala 4 × 4 ga - ekesa n’ime ebe echekwara. Ọnụ ego ahụ agaghị agafe $ 45 ma ọ bụ $ 50 maka onye ọ bụla. Dị ka ọ na-adị, oge njem mmụta ahụ bụ ihe dịka awa 3 ma ọ bụ 4, iji zuru oke iji nwayọ na-aga n'oké ọhịa na ala na ọdọ mmiri.
Ọ dị mfe ịmekọrịta ọrụ a ozugbo anyị nọ na mba ahụ, ịkwesighi ịkwado ya site na ebe a. Thelọ obibi ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ n'onwe ya ga-achịkwa njem ahụ. Nhọrọ ọzọ bụ ịga obodo ndị kacha nso n'ọnụ ụzọ ogige ahụ were ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ebe ahụ, n'akụkụ na n'okporo ụzọ ahụ jupụtara na ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ maka ụdị ego a na-enye mgbe niile iji mee njem ahụ.
Ihe ezi uche dị na ya ga-abanye na ogige ahụ na-abịa site na Sigiriya nke dị nso (naanị 10Km), ana m akwado ka ị gaa na saịtị ihe ochie na ebe nketa ụwa nke Sigiriya n'oge ụtụtụ, malite n'isi ụtụtụ, na n'ehihie ịkwaga Minneriya ka gaa na safari. Enwere ike iru Sigiriya site na ụgbọ oloko, ụgbọ ala ma ọ bụ bọs si Colombo (isi obodo) ma ọ bụ site na Kandy (obodo nke abụọ kachasị ukwuu ma dị na etiti Sri Lanka).
Ọ mara mma nke ukwuu ịhụ ka anwụ na-acha na enyí na mpaghara ndị mara mma site na ogige a.
Nhọrọ ọzọ dịnụ bụ ime akụkụ nke safari na-agba elephant. Offọdụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ a, jiri enyí zọọ ije na Minneriya na enyí site na ahịhịa na oke ọhịa. Onwe m, amaghị m ma ọ bara uru, ọ masịrị m iji ụgbọ ala mee njem ahụ dum.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Minneriya? Anụmanụ
Ogige Ntụrụndụ Minneriya bụ ewu ewu na ụwa maka enyí ndị Asia. Enwere ọtụtụ narị n'ime ha n'ọhịa ma ọ dị mfe ịhụ ọtụtụ n'ime ha n'otu ehihie. Ibikọ ọnụ n'etiti ụmụ mmadụ na anụmanụ ndị a bụ ihe ebumpụta ụwa na nkwanye ùgwù, ọtụtụ ụgbọ ala agbaala ha ụra ịhụ ha kwa ụbọchị. Ma mụ onwe m chere na e nwere ọtụtụ ụgbọ ala ebe anụmanụ dị karịa. Amaghị m ma ọ bụrụ na gọọmentị na-eweta ọnụ ụzọ mbata nke ogige ahụ kachasị.
N'oge ọkọchị (oge ọkọchị na mpaghara ahụ), enyí na-abịa ugboro 1 ma ọ bụ abụọ kwa ụbọchị ị toụ mmiri na ọdọ mmiri, ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-ahụ enyí ndị ahụ nso.
E wezụga enyí, ogige ahụ jupụtakwara enwe, chameleons, flamingos na ụdị nnụnụ niile, ekwuru mmiri, atụ mmiri, ... Enwekwara agụ owuru, ọ bụ ezie na o siri ike ịhụ ha.
N’ime hekta ole na ole ị ga-ahụ ụdị anụmanụ ọ bụla.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Minneriya? Ifuru
Ogige Ntụrụndụ Minneriya dị n'oké ọhịa nke Sri Lanka.
Ahịhịa nke ogige ahụ nwere oke ọhịa na-acha ahịhịa ndụ na-ekpo ọkụ, na-agwakọta na ahịhịa ndụ, ebe shrub na ala mmiri. Ebe ala kachasị dị na mpaghara a bụ ọdọ mmiri na ala ahịhịa juru.
Offọdụ osisi ndị dị na Minneriya bụ ụmụ amaala agwaetiti ahụ, enwere ike ịhụ ha naanị n'obodo a. Dịka ọmụmaatụ osisi nkwụ nke Ceylon. Ọnọdụ ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ezo na-emepụta ohere nke ịma mma pụrụ iche.
Site na ahụmịhe m, enwere m ike ịgwa gị na safari dị na Sri Lanka adịghị ka nke Safari nke Africa mana ọ bụ ahụmịhe zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-aga Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Dịka m kwuru na mbụ, ebe ọ dị nso na triangle ọdịbendị, ana m atụ aro ka ị gaa Sigiriya n'ụtụtụ na Minneriya n'ehihie. Ọnụ ụzọ ahụ adịchaghị ọnụ ala mana na elekere abụọ ma ọ bụ atọ nke safari ị ga-anụ ụtọ ọdịdị ala na ụmụ anụmanụ nke ogige ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Colombo » Minneriya, safari kacha mma na Sri Lanka
Ihe ịhụ na Milan